UMvikeli onempilo - Wanhe Industry and Trade Co., Ltd.
Kulula futhi kuyonga ukufaka ebusweni bezisekelo ezahlukahlukene. Izinga lesisekelo alikho phezulu. Ayikwesabi ukuqhekeka, akukho ukukhathazeka ngokugqama nokuzimisela. Izinto ezenziwe ngotshani wokuzenzela zilungele imvelo, umkhiqizo ophelile uyakhiwa, isikhathi sokwakha simisiwe futhi sifushane, ikhwalithi kulula ukuyazi, futhi ukwamukelwa kulula.
Ukuhleleka kwenkundla yezemidlalo ye-turf yokufakelwa kuhle, izinga lokusetshenziswa liphezulu, isikhathi sokuphila singafinyelela eminyakeni engaphezu kwengu-8, futhi sihlala isikhathi eside futhi simelana nokugcinwa, futhi singasetshenziswa ngokuqhubekayo usuku lonke.
Utshani bokufakelwa kulula ukubugcina, izindleko zokugcina eziphansi, zidinga kuphela ukugeza ngamanzi ukuze ususe ukungcola, futhi zinezici zokungabuni nokungaguquguquki.
I-turf yokufakelwa inezici zokumunca ukushaqeka, awukho umsindo, ukuphepha nokungabi nabungozi, ukuqina, nokubambezeleka okuhle kwelangabi. Ilungele ukusetshenziswa kwesikole futhi njengamanje iyindawo engcono kakhulu yokuqeqeshwa, imisebenzi, nemincintiswano.
I-turf yokufakelwa yamukela umqondo wokuphepha nokuvikelwa kwemvelo ukugwema ukulimala kwezemidlalo. Inikeza amandla okuqinisa okwanele ukunciphisa umonakalo ongahle udalwe yinhlabathi ejwayelekile eqinile ezinyaweni, ukuze ukhululeke ngokuphelele ekukhathazekeni okuhlukahlukene okubangelwe yindawo.
Mbumbulu Utshani Carpet, Utshani Lokuzenzela, Ibhola le-Turf Grass, Utshani Begalofu Lokufakelwa, Inkundla yebhola lezinyawo i-Astro Turf, Utshani Bokubeka Indawo Ngokuhleleka Kwendawo,